China Carbomer1342 fekitori uye vagadziri | Yinuoxin
Carbopol, inozivikanwawo se carbomer, ndeye acrylic crosslinking resin yakakwenenzverwa neacrylic acrylic ne pentaerythritol zvichingodaro. Iyo yakakosha rheology mutongi. Mushure mekusatendeseka, Carbomer inoyevedza gel matrix ine kukora, kuturika uye kumwe kushandiswa kwakakosha. Iyo ine yakapusa maitiro uye kugadzikana kwakanaka. Inoshandiswa zvakanyanya mu emulsion, kirimu uye gel.
Chemical Zita: Muchinjikwa-wakabatanidzwa Polyacrylic Acid Resin
MaMore mameseji: - [-CH2-CH-] N-COOH
Chitarisiko:chena yakasviba upfu
PH Kukosha: 2.5-3.5
Hunyoro zvemukati%: .02.0%
Carboxylic asidhi zvemukati%: 56.0-68.0%
Heavy Metal (ppm): -20ppm
Hunhu: Iyo ine yakasimba kwazvo kushanda kwekukora uye inogona kuburitsa yakajeka kristaro mvura kana doro-yemvura gel, uye inogona kunyatsorwisa ions.
Rangi reKushandisa:Iyo chikamu chikamu chekusvitsa zvinodhaka uye ine polymerization-uye-emulsification maitiro Munharaunda ye electrolyte, iri zvakare yakanaka rheology modifier.
Carbomer - Kuzivikanwa
Tora chigadzirwa 0.1 g, wedzera mvura 20ml uye 10% sodium hydroxide solution 0.4ml, iri gel fomu.
Tora 0.1g yechigadzirwa ichi, wedzera 10ml yemvura, zunza mushe, wedzera 0.5ml thymol yebhuruu chiratidzo solution, inofanira kunge iri orange. Tora 0.1 LG yechigadzirwa ichi, wedzera 10 ml mvura, zunza mushe, wedzera 0.5 ml cresol red chiratidzo solution, inofanirwa kuve yero.
Tora 0.lg yechigadzirwa ichi, wedzera 10ml yemvura, chinja pH kukosha ku7.5 ine lmol / L sodium hydroxide solution, wedzera 2ml ye10% calcium gasification solution uchikurudzira, uye nekukurumidza gadzira chena.
Iyo infrared absorption spectrum (yakajairika mutemo 0402) yechigadzirwa ichi chinofanirwa kuve nehunhu hwekudyiwa panhamba inozunguzirwa ye1710cm-1 ± 5cm-1, 1454cm-1 ± 5cm-1, 1414cm-1 scrrt1, 1245cm-1 ± 5cm-1, 1172cm-1 ± 5ccm-1, 1115cm-1 ± 5citt1 uye 801cm-1 ± 5citt1, pakati payo 1710cm-1 ine yakanyanya kunwa.
Kurongedza Nzira: 10kg Carton
Hunhu Hwakanaka: CP2015
Pasherufu Hupenyu:makore matatu
Kuchengetedza uye Kutakura: Ichi chigadzirwa hachisi chepfu, murazvo unodzora, sekutakura kwakawanda kwemakemikari, akanamwa uye akachengetwa munzvimbo yakaoma.
Mashoko:kambani yedu inopawo dzakasiyana mhando dzeCarbopol dzakateedzana zvigadzirwa.